MAHAJANGA : Afaka 2 herinandro vao ho foana ny delestazy eto amin’ny renivohitr’i Boeny
Lasa valanaretina mila fitsaboana koa ny fahatapahan-jiro ato amin’ny renivohitr’i Boeny amin’izao fotoana izao. 27 octobre 2017
Any amin’ny fahavalon’ny volana novambra any vao ho tapitra tanteraka ny delestazy araka ny resaka nifanaovana tamin-dRabevahoaka, talem-paritry ny orinasa Jirama. Efa tafakatra 8,5 Mw, hoy izy ankehitriny ny tanjaka azon’ny orinasa omena hamatsiana ny tanàna.
Araka izany dia afaka andro vitsivitsy dia ho foana aloha ny delestazy amin’ny antoandro satria 5 Mw sisa ny tanjaka ilaina tsy mahafeno ny 13,5 Mw, izay tanjaka ilaina ahafahana mamatsy ny tanàna iray manontolo. Aorian’ny 28 oktobra araka izany dia mbola mitohy ny fahatapahana amin’ny alina izay haharitra eo amin’ny herinandro eo, fotoana izay ahafahana mamerina amin’ny laoniny ny fahasimbana teo amin’ireo fitaovana famokarana herinaratra.
Na izany aza anefa dia mbola mampikaikaika ny rehetra ity resaka fahatapahan-jiro ity, noho ny fikatsoan’ny asa atao amin’ny andavanandro izay miankina betsaka amin’ny herinaratra.